Massimo Dutti inopa nyowani yekutsikisa imba SS21: Nyowani Edgy | Bezzia
Massimo Dutti anounza imba nyowani yekutsikisa SS21: Nyowani Edgy
Maria vazquez | 09/06/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Massimo Dutti nguva pfupi yadarika akapa itsva yekunyora kwematsutso-zhizha 2021. Mupepeti uri pasi pezita rekuti New Edgy unotipa mazano ezuva nezuva uye anogoverana vamwe vakapepetwa nefemu kare iko kuzvipira kune yakasikwa palette, kunyangwe iine inokatyamadza nuances.
Paunotarisa kekutanga paNew Edgy, chinhu chekutanga chinobata ziso rako ndiko kukurumbira kunoita dzimwe mbatya dzakadai semabhurugwa emachira, tayi dhayi yekudhinda mahembe uye t-shirts dzine ribbed. Nguo dzakagadzirirwa nakidzwa nezhizha mukunyaradza.
1 Palette yemavara
2 Sunga Dye motifs
3 Izvo zvakakosha zveMassimo Dutti
Akajairira edhisheni dzinonyanya kuchengetedza kana zvasvika pakara, iyo rakakura kudaro ruvara pendi kune iyo iyo femu yakabheja pane izvi. Rakajeka pendi pendi umo matoni asina kwazvakarerekera anosanganiswa nemamwe ane simba senge maorenji, mapinki uye magirini.
Sunga Dye motifs
Mune imba yekushambadzira umo mbatya zhinji dziri pachena, tayi dhayi motifs hadziende pasina kucherechedzwa. Isu tinonyatsoda hembe nesiketi zvakaiswa chena, shava uye bhuruu toni dzakagadzirwa nedonje uye sirika jira. Asi zvakatonyanya kudaro hembe mumaranjisi uye epingi matoni, akagadzirwa ne100% ramie machira.
Izvo zvakakosha zveMassimo Dutti
ari bhandi yerineni bermuda zvikabudura vanova hanzu yakakosha yeMassimo Dutti mwaka uno. Mune mavara asina kwazvakarerekera anoshanduka kwazvo, zvisinei, isu hatigone kubvisa maziso edu pamuenzaniso unowanikwa mune girini nepepuru mune ino yekunyora. Uye isu tinoda zano rekuzvibatanidza nehembe nejasi rine mazamu maviri.
Knitwear imwe kiyi kuunganidzwa, kunyanya akafukidzwa masiketi uye ribbed tangi misoro. Pamwe chete neaya zvakare anomira pamusoro pe-shirts kana madhirezi ehembe anoshanda sejasi uye ayo mune mavara senge beige kana khaki inosangana nezvose.
Iwe unoda here zvirevo zvitsva kubva kuInditex boka femu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Massimo Dutti anounza imba nyowani yekutsikisa SS21: Nyowani Edgy
Maitiro ekugadzirisa nemhedzisiro yehukama hune chepfu
Kicheni marobhoti, ndeupi wandinofanira kusarudza?